जात्राका नाममा चण्डाल प्रवृत्ति बन्द गरौं ! – Smartkarnalinews
बुधबार, भदौ १७, २०७७ 4:47:51 PM	मा प्रकाशित
पछिल्ला दिनहरूमा कालिकोट र केही आसपासका जिल्लाहरुमा व्यापक रुपमा जात्रा (पैठ) भैरहेका छन र केही हुदैछन । यो बिषयमा स्थानीय तहले रोकथाम तथापि नियन्त्रणमा निकै हेलचेक्राई गरेको पाइएको छ । खासगरी पुजा पाठ हुनु स्वभाबिक नै हो तर यति धेरै कहिँ नभए जात्रा हाँडिगाउँमा भन्या जस्तै भएका छन् । हिजो मात्र तिलागुफा न.पा मा दर्जनौं कोरोना सङ्क्रमण देखिएको तपाईं हामी सबैलाई थाहा नै छ । त्यस संगसगै छिमेकी जुम्ला जिल्ला हिमा गाउँपालिकामा ठूलो सङ्ख्यामा कोरोना भाइरसका नागरिक भेटिएको सर्वबिधितै छ । बिश्व नै कोरोनाको महामारीले गर्दा देसको अर्थतन्त्र निक्कै नै धरासायी छ । यहि सन्दर्भमा कयौं बिकासका सम्पन्न योजना भुक्तानी गर्न स्थानीय तहलाई हम्मेहम्मे छ ।
यसले गर्दा कयौं नागरिक र स्थानीय तह बिच मनमुटाव र एक खालको तरंग फैलिएको छ । यसको मुख्य कारण नै कोरोना महामारी हो । यो बर्ष बिकास भन्ने १५% पनि हुने सम्भावना छैन यहि कोरोना कारणले । यसले सबैभन्दा असर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी नागरिक नै पर्ने हो । एउटा त अर्थतन्त्र धराशायी छ । अर्को स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पर्याप्त औसधिको अभाव, अझ त ग्रामीण भेगका स्थानीय तहमा आइसोलेसन, भेन्टिलेटर हुनु भनेको आकासको फल आँखा तरि मर भन्या जस्तै हो । त्यही माथी कोरोनाको कहर फैलियो भने सम्बन्धित स्थानीय तहको हालत के होला ? मै हुँ भन्ने अमेरिका, युरोप, अफ्रिका, एशियाली मुलुकहरुमा भिखारी जस्तो अवस्था सिर्जना भैसकेको छ । फेरि हामी गरिब मुलुकका नागरिक गफ छाड्न माहिर तर काम भने सिन्को भाची दुई काम नगर्ने ।
अब सोचौं बाँकी हाम्रो हालत के होला ? अफ्रिकी मुलुकमा लाखौंलाख श्रमजीवी नागरिक भिखारी अवस्थामा जीवन गुजारा गर्दैछन् । फेरि नेपाल मुलुक भनेको पश्चिमी डाँंकु र भारतिय बिस्तारवाद का केही बाश्चा भनेर कहलिने जर्ज फ्रन्नान्डेजहरुले आफ्नो इसारामा चलाइरहेको अवस्थामा हामी जति हल्ला गरेपनि एउटा खोलामा चल्ला चिउँचिउँ गर्या जस्तो मात्र हो । चौधरी ग्रुप,गोल्छा, माँडवारिहरुले लुटिसकेको देसमा कम्युनिस्ट कम्पनी नामको एउटा असली सिआइए र रअको एजेन्ट छानेर सरकारमा मुडुलो राखेको छ । जो हजुर भन्ने पात्र मात्र छन् ।त्यसको प्रत्यक्षदर्शी गणतन्त्रमा संसदीय ब्यवस्थाको नाटक र मन्थन राम्रोसँग बुझ्दा हुन्छ । तसर्थ बेलैमा सचेतता नअपनाए भोलि आउने कोरोना कहरको महामारीको भागेदार स्वयं हामी नै हौं । सचेत बनौं । सजग बनौं । स्थानीय तह र प्रशासनले तत्काल यस्ता जात्रा बन्द गर्न सहयोग गरौं । पुजापाठलाई मात्र प्राथमिकता दिउँ
प्रकाशित मितिः बुधबार, भदौ १७, २०७७ 4:47:51 PM